No. 2155, Sunday, June 16, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2155, Sunday, June 16, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၄ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ ဇွန် ၁၆ ၊ ၂၀၁၉)
လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် မီဒီယာအပေါ် တရားစွဲဆိုမှု ၃၆ မှုရှိဟု အသံအဖွဲ့ထုတ်ပြန်
သက်အောင် ရန်ကုန် - ဒီချုပ်အစိုးရလက်ထက် တွင် သတင်းမီဒီယာများအပေါ် တရားစွဲဆိုမှု ၃၆ မှုရှိပြီး သတင်း သမား ၅၂ ဦး တရားရင်ဆိုင်နေ ရကြောင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အသံ က ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန် သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်ရှိ လက်ကိုင်ဖုန်းများ ခိုးယူခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးအိမ်ရာ အတွင်းနေထိုင်သည့် ရခိုင်ပြည် နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နေအိမ်အ တွင်းသို့ သူခိုးဝင်ရောက်မှုကြောင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှစ်လုံး ပျောက်ဆုံး ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစံ ကျော်လှက ပြောသည်။
ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံး
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် မြို့နယ် ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်တွင် ရေကစားသူအမျိုးသားတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဇင်းကျိုက် နယ်မြေရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ် ရဲလင်းနောင်က ပြောသည်။
တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ခင်းများအတွင်း ဓာတုဆေးသုံးစွဲမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနေ၊ ရလဒ်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ တင်မည်
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်များ၌ အန္တရာယ်ရှိ ဓာတုဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရှိ၊ မရှိ အမျိုး သားလွှတ်တော်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးကော်မတီက ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးနေပြီး စစ်ဆေးမှုအခြေအ နေကို ပြည်ထောင်စ
အနုပညာရှင်တွေအသုံးချခံရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောကြားတဲ့ မက်ဒေါနား
သမ္ဘာရင့်အဆို တော်မက်ဒေါနားက ၎င်း၏အနု ပညာအလုပ်အစပိုင်းတွင် လိင်မှု ကိစ္စအတွက် စံချိန်တင်ငွေပမာ ဏပေး၍ ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရပုံကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး အနုပညာ လောကသို့ဝင်ရောက်လာသူများ အသုံးချခံရကြောင်း ပြောကြား သည်။
သမ္မတမွန်ဂျေအင်နဲ့အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ ဂျောင်ဂျေအင်
ကေပေါ့ပ်အဆိုတော် ဂျောင်ဂျေအင်သည် တောင်ကိုရီး ယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်နှင့်အတူ ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို လူမှုမီဒီယာတွင် ပို့စ်တင်ခဲ့သည်။
အကယ်ဒမီဆုရှင် ကိုးဦး အားပြိုင်ထားတဲ့ ‘နှစ်ပတ်အလို’ဇာတ်ကား
‘နှစ်ပတ်အလို’ ရုပ်ရှင် သည် ၎င်းကိုယ်တိုင်ရေးသား သည့် ၀တ္ထုကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆုရှင် ကိုးဦး၏ အားပြိုင်မှု မြင်တွေ့ရမည်ဟု ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)က ပြောသည်။
ရုပ်ရှင်နှစ် (၁၀၀)ပြည့် အကြို အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်မည်
၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် ရုပ် ရှင်နှစ် (၁၀၀)ပြည့် အကြိုအနေ ဖြင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး က ဦးဆောင်မတည်၍ အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင် ၀ိုင်းက ပြောသည်။
စည်းကမ်းဖောက်၍ လိုင်စင်ယာယီရုပ်သိမ်းခံရသည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ ၂၂ ခုရှိ
စည်းကမ်းချိုးဖောက် သည့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေ ဂျင်စီ ၂၂ ခုကို အလုပ်သမားစေ လွှတ်ခွင့် လိုင်စင်ယာယီရုပ်သိမ်း အရေးယူထားကြောင်း အလုပ်သ မားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန တာ ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
စိတ်ကြွဆေးပြားသိန်းချီ ဝင်ရောက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် X-ray စက်နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများဖြင့် စစ်ဆေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ တင်ပြ
စိတ်ကြွဆေးပြားသိန်း ချီဝင်ရောက်နေသည့် ရခိုင် ပြည်နယ်ရှိဂိတ်များ၌ X-ray စက် များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစ ခန်းများဖြင့် စစ်ဆေးရန် ပြည် ထောင်စုအစိုးရသို့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက တင်ပြခဲ့သည်။
နတ်ပူး၍ ရွှေအတုများပေးကာ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ လိမ်လည်ရယူခဲ့သည်ဆိုသူကို အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေ
နတ်ပူး၍ ရွှေအတုများ ပေးကာ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ လိမ် လည်ရယူခဲ့သည်ဆိုသူကို အမှု ဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း မြန်မာနိုင် ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့တွင် ထုတ် ပြန်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၏ သုံးနှစ်တာသက်တမ်းအ တွင်း ပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံမှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က ၀န်ခံသည်။
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ သားသမက်ကွယ်လွန်၍ မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စာပို့
အငြိမ်းစားဗုိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေ၏သားသမက် ဗုိုလ်မှူးချုပ်သိန်းနုိုင်(ငြိမ်း) ကွယ်လွန်ကြောင်းသိရ၍ မိသားစုနှင့်ထပ် တူဝမ်းနည်းရကြောင်း နုိုင်ငံတော် ၏ အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က စာရေးသားပေး ပုို့ခဲ့သည်။
မြန်မာ၏ လူမှု-စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထောက်ခံမည်ဟု အီးယူထပ်မံအတည်ပြု
ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက် ချက်များအပေါ် ခိုင်မာစွာဆက် လက်ထောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၁၄ ရက်တွင် အတည်ပြု သည်။
ဝင်ခွင့် တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူမည့် တက္ကသိုလ်သုံးခု ထပ်တိုး
ယခုနှစ်တွင် ဝင်ခွင့်တိုက်ရိုက်ခေါ်မည့် တက္ကသိုလ်သုံးခု ထပ်တိုးထားပြီး တိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့် လျှောက်ရမည့် တက္ကသိုလ် ၁၄ ခုဖြစ်လာကြောင်း အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ အောင် အောင်မင်းက ပြောသည်။
ဂျပန်နှင့်ပွဲတွင် ဆန်းချက်ဇ် ပါဝင်လာနိုင်
ဆော်ပေါ်လို − တိုက်စစ်မှူး အ လက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ်သည် ခြေ ချင်းဝတ်ဒဏ်ရာ ပြဿနာမှ ပြန်ကောင်းလာကာ ဂျပန်နှင့်ကစားမည့် ကိုပါအမေရိကပွဲတွင် ပါဝင်လာနိုင်သည်ဟု ချီလီနည်းပြ ရိုင်နယ်ဒိုရူဒါက ပြောသည်။
ဥရုဂွေးနှင့် အီကွေဒေါ၊ ပါရာဂွေးနှင့်ကာတာတို့ တွေ့ဆုံမည့် ကိုပါအမေရိကပွဲစဉ်များ
ဆော်ပေါ်လို - ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ ကျင်းပနေသော ကိုပါအမေရိက ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစဉ်များ၌ ယခုည၁ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် ပါရာဂွေး နှင့် ကာတာ ကစားမည်ဖြစ်ကာ ဇွန်လ ၁၇ ရက် နံနက် ၄ နာရီမိနစ် ၃၀ ၌ ဥရုဂွေးနှင့် အီကွေဒေါတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။
ရေကူးအဖွဲ့ချုပ်ကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည့်အစီအစဉ် အားကာဝန်ကြီးညှိနှိုင်းပေး၍ ရပ်ဆိုင်း
ပဏာမလက်ရွေးစင် ရေကူးကစားသမား ရွေးချယ်မှုအ ပါအ၀င် ရေကူးအဖွဲ့ချုပ်ကို မကျေနပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည့် အစီအစဉ်ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ညှိနှိုင်းမှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ကြောင်း ကစားသမားမိဘဒေါ်ဇာဇာထွန်းက ပြော
မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် AA ဟု သံသယရှိသူ ၂၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်း တပ်မတော်ပြော
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (AA) အဖွဲ့ဝင်များဟု သံသ ယရှိသည့် မြောက်ဦးမြို့နယ်အ တွင်းမှ ဒေသခံ၂၅ ဦးကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း တပ်မ တော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအ ဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် တာဝန်ယူစဉ် အပ်နှံထားသည့်ငွေစာရင်းအချို့ကို စစ်ဆေးရန် ဗဟိုဘဏ်ကပိတ်သိမ်းထားဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြော
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူစဉ်က CB နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင်အပ်နှံထား သည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ် သက်သော ငွေစာရင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဗဟိုဘဏ်က ပိတ်သိမ်းထားကြောင်း တနင်္သာ ရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်က ယမန်နေ့တွင် 7Day Daily သ တင်း
ကိုပါအမေရိကဖွင့်ပွဲတွင် ဘိုလစ်ဗီးယားကို ဂိုးပြတ်နိုင်သော်လည်း ဘရာဇီးအသင်းကို ပရိသတ်များလှောင်ပြောင်
ကိုပါအမေရိက ဖလားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲတွင် ဘိုလစ်ဗီး ယားကို သုံးဂိုးပြတ်အနိုင်ရသော် လည်း ဘရာဇီးသည် အသင်းပရိ သတ်များ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အာရှပိုက်ကျော်ခြင်း ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်း ငွေ နှစ်ခု ရရှိ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် အာရှပိုက်ကျော်ခြင်း ချန်ပီယံရှစ် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းက ငွေတံ ဆိပ် နှစ်ခု ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
မြန်မာလိဂ်-၂ တွင် ချင်းအသင်း အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးရောက်လာ
မြန်မာလိဂ်-၂ ပွဲစဉ် (၈) အပြီးတွင် အားကာသိပ္ပံနှင့် ချင်းအသင်းတို့ ရမှတ် ၁၇ မှတ်စီတူညီနေသော်လည်း ဂိုးကွာခြား ချက်သာသည့် ချင်းအသင်းက အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင် ထားသည်။
MIU ဖူဆယ်အသင်း ခြေစမ်းပွဲ၌ ထိုင်းကလပ် ဟောင်ရန်းတာကန်ကို ရှုံးနိမ့်
အာဆီယံ ဖူဆယ်ကလပ် ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲအကြို ယှဉ်ပြိုင်သည့် ခြေစမ်းပွဲတွင် မြန်မာဖူဆယ်ကလပ် MIU အသင်းသည် ထိုင်းဖူဆယ်လိဂ်ကလပ် ဟောင်ရန်းတာကန်အသင်းကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
ဖိုးသော်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကို ပထမအချီတွင် အလဲထိုးဖြင့် အနိုင်ယူ
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် MMA(One Championship) ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာကစားသမား ဖိုးသော်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား ဗစ်တိုရီယို ဆန်ဒက်ကို ပထမအချီတွင် အလဲထိုးဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။
ကျောက်မျက်အချောထည်များ လမ်းကြောင်းကန့်သတ်ချက်မရှိ ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်မည့် အရောင်းစင်တာငါးခု ဖွင့်လှစ်မည်
ပြည်ပတင်ပို့နေ သည့် ကျောက်မျက်အချောထည် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုအဆင်ပြေ အား ကောင်းလာစေရန် ကျောက်မျက် အရောင်းစင်တာ (GTC-Gems Trade Center)များကို မြို့ငါးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းသူက 7Day Daily သတင်းစာအား ပြောသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရက ပဲစင်းငုံတန်ချိန်နှစ်သိန်း ထပ်မံတင်သွင်းခွင့်ပြု
ပြည်ပမှ ပဲစင်းငုံတန်ချိန် နှစ်သိန်းထပ်မံတင်သွင်းရန် အိန္ဒိ ယအစိုးရက ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့်နှမ်းကုန် သည်အသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦး မင်းကိုဦးက ပြောသည်။
ဆေးခြောက်စိုက်ခင်းဆိုကာ တရားစွဲဆိုခံရသော အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏မိသားစုဝင်များက မြန်မာအစိုးရနှင့်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ထံ အသနားခံစာတင်
မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဇွန်မြို့ နယ်ရှိ မြို့သာစက်မှုဇုန်တွင် စိုက် ပျိုးသည့် ပျိုးပင်များ၌ ဆေး ခြောက်ပါဝင်သည်ဆိုကာ ဖမ်း ဆီးခံထားရသော အမေရိကန် နိုင်ငံသား၏ မိသားစုဝင်များက မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် ထံ အသနားခံစာပေးပို့သည်။